Billy Bishop Toronto City Airport iji maliteghachi ọrụ ụgbọ elu azụmahịa na September 8
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Billy Bishop Toronto City Airport iji maliteghachi ọrụ ụgbọ elu azụmahịa na September 8
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A kwụsịtụrụ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa na ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop na Machị 2020, n'ihi nsonaazụ ọrịa zuru ụwa ọnụ nke COVID-19 yana mmachi njem ndị metụtara ya.
Tupu ọrịa a, Billy Bishop Airport nabatara ihe dị ka nde ndị njem 2.8 kwa afọ, na-akwado ihe karịrị ọrụ 4,700, ma mepụta $ 470 nde na GDP.
Ortergbọ elu Porter ga-akwụsị ịrụ ọrụ / site na Toronto, na-efega Montreal, Ottawa na Thunder Bay na September 8.
A na-atụ anya Air Canada ịmalitegharị ọrụ Montreal na Septemba.
PortsToronto, nwe na ọrụ nke Billy Bishop ọdụ ụgbọ elu Toronto City, Obi dị ya ụtọ ikwenye na ọrụ ụgbọ elu azụmahịa na / site na ọdụ ụgbọ elu nke ime obodo ga-amaliteghachi na September 8, 2021, na ọkwa mmalite nke Porter Airlines n'ụbọchị ahụ. Porter Airlines ga-akwụsị ọrụ ya na / site na Toronto, na-enye ụgbọ elu na Montreal, Ottawa na Thunder Bay na Septemba 8, na-ebubata ebe asatọ ọzọ na ntanetị nke Septemba 13. A na-atụ anya ka Air Canada maliteghachi ọrụ Montreal. na Septemba kwa.
“PortsToronto nwere obi ụtọ ikwenye na ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop ga-ebido ọrụ ụgbọ elu azụmahịa na Septemba 8, 2021, wee bido usoro icheta ndị ọrụ, ịkwadebe ọdụ ụgbọ elu na ịgụta ụbọchị ruo mgbe anyị nwere ike ịnabataghachi ndị njem na ihe ịga nke ọma na nrite anyị. -i nweta ọdụ ụgbọ elu, ”ka Geoffrey Wilson, Chief Executive Officer, PortsToronto kwuru. “Ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop bụ akụ dị na obodo Toronto na mpaghara gbara ya gburugburu nyere mmetụta ya n'ịkwado akụ na ụba, ịkwalite azụmahịa na njem nleta, na inye ọtụtụ puku ọrụ. Billy Bishop Airport ga-arụ oke ọrụ na mgbake akụ na ụba nke obodo na mpaghara anyị, anyị nwere obi a toụrị iji bulie ọrụ anyị ma laghachi na azụmahịa nke ijikọ ndị njem na ndị mmadụ, ebe, ahụmịhe na ọrụ ha hụrụ n'anya.
A kwụsịtụrụ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa na ọdụ ụgbọ elu Billy Bishop na Machị 2020, n'ihi nsonaazụ ọrịa zuru ụwa ọnụ nke COVID-19 yana mmachi njem ndị metụtara ya. Ọdụ ụgbọ elu ahụ meghere n'oge ọrịa ahụ gbasiri ike iji hụ na ọrụ na-aga n'ihu maka ọrụ Ornge medevac, na ijere ndị ọrụ mpaghara dị ka FlyGTA na Cameron Air, ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị njem njem dịka Helitours.
Tupu ọrịa a, Billy Bishop Airport nabatara ihe dị ka nde mmadụ 2.8 kwa afọ, na-akwado ihe karịrị ọrụ 4,700, ma mepụta $ 470 nde na GDP. Ọdụ ụgbọ elu na-atụ anya ịlaghachi na ọrụ ndị a na mmetụta dị mma. Airgbọ njem ụgbọ elu amalitelarị ịlọghachi n'ọtụtụ ahịa gburugburu ụwa, ebe US na-akọ nlọghachi na 65 pasent nke ọkwa ọrịa na-efe efe na Mee 2021, na atụmanya maka mmụba ọzọ ka oge okpomọkụ na-eru nso.
Billy Bishop Airport bidoro Mmemme Njem Nchedo ya na ọnwa ndị na-adịbeghị anya iji kwadebe ọdụ ụgbọ elu na ndị njem ya maka usoro ọhụụ ọhụụ ọha na eze nke emelitere metụtara njem. A na-akwado mmemme a site na mmemme nke ya na onye ọ bụla na-ebu ya - Porter Airlines's Healthy Flights program na Air Canada's CleanCare + program.